ကမ်းခြေအနီးရောင်းရန် POOL HOME!
Real Estate Listings: » Residential homes » US » Florida » Saint Petersburg » ကမ်းခြေအနီးရောင်းရန် POOL HOME!1
ပြင်ဆင်ထားသည်2weeks ago
အခြေအနေ: Good condition
အရွယ်အစား (စတုရန်းပေ): 1346
တော။ ကြမ်းပြင်၏: 2
တော။ ကားတစ်စီးအတွက်နေရာများ: 3
အခြေအနေ: Updated and Landscaped
system အမျိုးအစားအအေး: Central
စျေးနှုန်းအမျိုးအစား: Sale price
အင်္ဂါရပ်များ: POOL and fire pit. Double lot. Oversized gated driveway. Balcony. Built-in dry bar. All appliances convey.
ယခု၏အိမ်ပြန်အိပ်မက်မက်! Waterfront Marina ၏မြောက်ဘက်တစ်မိုင်အကွာတွင်ရှိသောဤဖလော်ရီဒါရှိ POOL HOME တွင်အဆုံးမဲ့နွေရာသီတွင်နေထိုင်ပါ။ Move-in ကိုမကြာသေးမီကအသစ်ပြောင်းခြင်းများနှင့်ကမ်းခြေအိမ်တွင်းကဲ့သို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်အတူအဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ A / C စနစ်အသစ်သည်အာမခံထားဆဲဖြစ်သည်။ လူမှုရေးအကွာအဝေးကို (၆) ပေသီးသန့်တည်ရှိသည့်ခြံစည်းရိုးပတ် ၀ န်းကျင်ကျယ်ပြန့်သည့်ဤကြီးမားသော DOUBLE LOT တွင်လွယ်ကူသည်။ ကြီးမားသော 30x17 မောင်းနှင်မှုသည်ကားများနှင့်လှေ / RV တံခါးပေါက်များနောက်တွင်ရှိသည်။ အနီးအနားရှိကမ်းခြေများပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်းမတိုင်မီအထိသင့်ကိုယ်ပိုင်လျှံတက်နေသောရေကူးကန်နှင့်မီးတွင်းများ၊ နှစ်ထပ်အိမ်တွင်ကျယ်ပြန့်စွာဖြန့်ရန်နေရာများစွာရှိသောကုတင် ၃ ခုနှင့်ရေချိုးကန် ၂ ခုရှိသည်။ စင်ကြယ်စွာစားရန်သီးခြားထမင်းစားခန်း; နက်ရှိုင်းသောဆွဲထွက်လှေကားအောက်မှာအပိုဆောင်းထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများသိုလှောင်။ သင်၏ရုံးခန်းကို BONUS ROOM တွင်တည်ဆောက်ပြီးအိမ်မှရေကူးကန်ရှုထောင့်မှကြည့်ပါ။ အင်တာနက် / ကေဘယ်လ်ကြိုးသည်အထက်ထပ်တွင်ကြိုးကြိုးတပ်ဆင်ထားသည်။ Master suite ရှိထူးခြားသောကိုယ်ပိုင်လသာဆောင်သည်သင်အပြင်ဘက်ရှိအရာအားလုံးကိုကျော်ဖြတ်နိုင်သည်။ အလွန်ကြီးမားသော 9x6 ensuite walk-in ဗီရိုတွင် stundundundered ပစ္စည်းများပါဝင်သည်။ Tampa ဂလားပင်လယ်အော်အကုန်လုံးနီးပါး။ လျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးသောကလေးပန်းခြံနှင့်ဇိမ်ခံ Gulfport နယ်နိမိတ်အတွင်းတွင်ရှိသည်။ စိန့်ပီတာမြို့ရှိလူအများအပြားလာရောက်လည်ပတ်ကြသောအိမ်သည်သင့်အားခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်! ကြိုတင်ခွင့်ပြုထားခြင်းသို့မဟုတ်ငွေကြေးသာကြိုတင်ခွင့်ပြုထားသည်။ အိမ်သည်ကမ်းခြေနှင့်နီးသော်လည်းရေလွှမ်းမိုးသောနေရာတွင်မဟုတ်ပါ။ နေရာမချပါ။ ရက်ချိန်းယူရန်လိုသည်။
[email protected] ပြပါ
အပေါ်မှတ်ပုံတင်ပြီး 15. Apr 2020
အပေါ်မှတ်ပုံတင်ပြီး April 15, 2020